Galaxy Software Company မှ ရေးဆွဲထားသော CaféPOS® System သည်လူကြီးမင်းတို့၏ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို IT နည်းပညာ အသုံးပြု၍ပိုမိုတိကျလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင် CaféPOS® စားသောက်ဆိုင်သုံးကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အားသာချက်များအနေဖြင့်
Customer မှာယူဟင်းပွဲများကို Computer,Phone,Tablet မှ Kitchen,Bar ကို တိုက်ရိုက်လှမ်းပို့နိုင်သည့် အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်းနှင့်ဧည့်သည်စောင့်ဆိုင်းရချိန်များ နည်းသွားခြင်း
Cashier မှလည်း ငွေရှင်းသည့်အခါ စနစ်မှအသင့်တွက်ချက်ပြီးသား ကျသင့်ငွေကို အလွယ်တကူBill ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
မိမိဆိုင်၏ အရောင်းစာရင်းများကို အလုံးစုံစီမံခန့်ခွဲနေစရာ မလိုပဲ Report များထုတ်ကြည့်ရုံဖြင့် လုပ်ငန်း၏အခြေအနေကိုချက်ခြင်းသိရှိနိုင်သောကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံး နစ်နာမှုများကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် မိမိဆိုင်နှင့် ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများ၏တိကျသော အချက်အလက်များကြောင့် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ နည်းဗျူဟာများကို လျင်မြန်တိကျစွာ ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Café POS Basic Package 800,000 Ks
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမည့် အရောင်းစာရင်းများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဝင်သော အရောင်းစာရင်းထိန်းချုပ် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
Customer သို့Bill ထုတ်ပေးခြင်း
Touch Screen အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
FOC/Vou Discount/Item Discount များတွက်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း
မှာယူဟင်းပွဲများကို Kitchen နှင့် Bar ဘက်သို့Printer မှတဆင့်ပို့နိုင်ခြင်း
Service Tax/Government Tax/Room Charges များတွက်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း
(POS Printer (3) လုံးအထိ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်..)
Tablet Module 600,000 Ks
Waiter များမှ Android Tablet အသုံးပြုပြီး ဟင်းပွဲOrderများ လက်ခံနိုင်ခြင်း ၊ Customer များအား ဟင်းပွဲများကို ပုံနှင့်တကွ ပြသနိုင်ခြင်း၊ မှာယူ ဟင်းပွဲများ လက်ခံပြီး Kitchen/Bar သို့တိုက် ရိုက် Order ပေးပို့နိုင်ခြင်း ၊ Customer များမှ ဟင်းပွဲများကို စိတ်ကြိုက်မှာယူ ပြုပြင်မူများ ( အစပ်လျှော့၊ အငန်လျှော့၊ …. ) အတွက် Tablet တွင် မှတ်သားနိုင်ပြီး Kitchen သို့တိကျစွာ ပေးပို့နိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် Module ပါသည်။
( Tablet (5) လုံးအထိ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်..)
Additional Tablet License – 1 Tablet 150,000 Ks
Waiter များမှ Android Tablet ဖြင့် Table အလိုက် Customer Order များမှာရန်အတွက် စာရင်းထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှု ခြင်းများကို Tablet တစ်လုံးချင်းအသုံးပြုလိုပါက လိုအပ်မည့် Module ဖြစ်ပါသည်။
Multi-Currency Module350,000 Ks
မိမိလုပ်ငန်း၏ အရောင်းအဝယ်များတွင် အသုံးပြုငွေအမျိုးအစားမှာ “ကျပ်” တစ်မျိုးသာမက USD, SGD, Yum, Bath,..etc. စသည့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးများ အသုံးပြုလျှင်Exchange Rate တိကျစွာထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးနိုင်မည့် Module ဖြစ်ပါသည်။
Kitchen Displaying / Monitoring System 350,000 Ks
Waiter များမှ ဟင်းပွဲ အမှာ များကို Kitchen ရှိ Monitor တွင် တိုက်ရိုက်ပြသနိုင်ခြင်း။
Kitchen မှ ချက်ပြီးသော ဟင်းပွဲများကို waiter ၏ Tablet သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
Waiter များ မှ မှာယူထားသော ဟင်းပွဲများ ချက်ပြုတ်ပြီး/မပြီး အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ခြင်း။
ဟင်းပွဲတစ်ခုချင်းစီ၏ ကြာချိန်များကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ခြင်း။
Remote Copy Module 250,000 Ks
ရုံးချပ်အပြင် ရုံးခွဲ၊ ဆိုင်ခွဲများရှိပြီး ထိုရုံးခွဲ၊ ဆိုင်ခွဲများမှ စာရင်းဇယားများကို ရုံးချုပ်တွင် ပြန်လည်စုစည်း နိုင်ဖို့အတွက်သာမက
ရုံးချုပ်မှ ဈေးနူန်း အပြောင်းအလဲစာရင်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းစာရင်းများ၊ ကြွေးကျန်စာရင်းများကို စနစ်တကျဖြင့် ရုံးခွဲ၊ ဆိုင်ခွဲအားလုံး၏ စာရင်း၊ဇယားများကို အပြန်အလှန်ပေါင်းစည်းပေးပြီး တစ်နေရာတည်းမှ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲနိုင်မည့် Module ဖြစပါသည်။
Food Court Module350,000 Ks
Food Court များ အတွက် Card System များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ Card အရောင်းစာရင်းများ ၊ Counter တစ်ခုခြင်းစီ၏ ရောင်းရငွေစာရင်းများ ကို တိကျလွယ်ကူစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ် ဖြစ်ပါသည်။
Table No. အလိုက် Reservation များလက်ခံနိုင်ခြင်း ။
Reserved လုပ်ထားသော Table များ ၊ Customer မရှိသေးသော Table များ ၊ Customer ရှိပြီးသော Table များအား အရောင်များဖြင့်လွယ်ကူစွာခွဲခြား သိရှိနိုင်ခြင်း ။
Table များကို ဆိုင်ရှိ area အလိုက် (ပထမထပ် ၊ ဒုတိယထပ် ၊ VIP နေရာ ) စသည်ဖြင့်စုဖွဲ့ ထားနိုင်ခြင်း ။
Waiter မှ မှာယူ ဟင်းပွဲများ လက်ခံပြီး Kitchen / Bar / Cashier သို့Tablet မှ တိုက်ရိုက် Print ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ။
ဟင်းပွဲမှာယူရာတွင် Customer စိတ်တိုင်းကျ ဟင်းပွဲများကို လို / တိုး / ပို / လျှော့Remarks များနှင့် တကွ Kitchen သို့Tablet မှ တိုက်ရိုက် Order ပေးပို့ နိုင်ခြင်း ။
ကျသင့်ငွေ /FOC / Vou Discount / Item Discount များ
Service Tax / Government Tax / Room Charges အစရှိသည့်Tax Charges များကို တိကျစွာ တွက်ချက်ပေးနိုင်ပြီး Customer သို့ လျှင်မြန်စွာ Bill ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ။
Waiter မှ Cashier သို့ Bill ကြိုတင်ထုတ်ထားရန် Tablet ဖြင့်Notification ပေးပို့ ထားနိုင်ခြင်း ။
Table တစ်ခုထဲတွင် Bill ခွဲရှင်းနိုင်ခြင်း ၊ Table များပေါင်းပြီး Bill ရှင်းနိုင်ခြင်း ။
Debit Card / Credit Card အစရှိသည့်Payment Card များဖြင့် ပေးချေမှုများကို မှတ်သားထားနိုင်ခြင်း ။
ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ၊ ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုအလိုက် promotion များသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
နာရီအလိုက် (Happy Hour) ၊ နေ့ရက်အလိုက် promotion များသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
တစ်ခုဝယ် တစ်ခုပေး (Buy X Get Y) အလိုက် promotion များသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
Food Court Module
နေ့စဉ်/လစဉ် အလိုက် ဟင်းပွဲ အရောင်းစာရင်းများ အစီရင်ခံစာ ။
Tax / Service Charges ရငွေများ သီးသန့် အစီရင်ခံစာ ။
အရောင်းရဆုံး ၊ အရောင်းထိုင်းဆုံးဟင်းပွဲ စာရင်းများ အစီရင်ခံစာ ။
နာရီအလိုက်အရောင်းစာရင်းများ အစီရင်ခံစာ ။
နေ့အလိုက်/ လအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ပြသော ဟင်းပွဲအလိုက် အရောင်းစာရင်းများ အစီရင်ခံစာ ။
Cashier တစ်ယောက်ချင်းအလိုက် ငွေစာရင်းကိုက်နိုင်သော အစီရင်ခံစာ ။
Cashier In / Out Report (Start Shift , End Shift) အစရှိသည့် အစီရင်ခံစာ ။
Kitchen /Bar တို့ မှ ချက်ပြုတ်လိုက်သော ဟင်းပွဲများ ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့်Cashier မှ ရောင်းလိုက်သော အရောင်းစာရင်းများအား တိုက်စစ်နိုင်သော အစီရင်ခံစာ ။
Cashier မှ ဖျက် / ပြင် လိုက်သော အရောင်းစာရင်း Voucher များကို ပြန်လည် ကြည့် ရှု့နိုင်သော အစီရင်ခံစာ ။
အစရှိသည့်Restaurant Analysis အတွက် အရေးကြီးသော Reports/ အစီရင်ခံစာ များစွာ ပါဝင်ပါသည် ။
Windows OS - Windows 7/ Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 / Windows 10
CPU - Pentium Dual Core / Core i3/i5/i7 / Core M3/M5/M7
Monitor Resolution - at Least 1366x768
Android Tablet Screen Size - at Least7inches
ရန်ကုန် ရုံးချုပ် :
အမှတ်(၄၃၈/ခ) + (၄၃၉/က)၊ သီဟသူလမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Sales : 09 43064181, 09 420909100, 09 254151516, 09 43029798